‘प्रधानमन्त्रीले सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको झल्को दिए’ « Khabarhub
‘प्रधानमन्त्रीले सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको झल्को दिए’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको झल्को दिन थालेको बताएका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेता कोइरालाले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष छन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर यस्तो झल्को दिएको आरोप लगाए ।
‘रवीन्द्र अधिकारीको दाहसंस्कार नहुँदै उनी निर्दोषी भनेर फैसला गर्ने प्रम न्यायाधीश ? यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो?’ निक्कै आक्रोशित देखिएका कोइरालाले भने, ‘चाहे जतिसूकै ठूला नेता हून वाइडबडी, बुढीगण्डकी अथवा एनसेल प्रकरणमा दोषी छ भने कानूनी कठघरामा ल्याईनूपर्छ। पदमा बसेको व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । जथाभावी बोल्न मिल्दैन ।’
कोइरालाले समयमै पार्टीको १४औं महाअधिवेशन गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले महाधिवेशन गर्न ढिला भए पार्टी कमजोर बन्ने बताए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य गुरुराज घिमिरेले विधान अनुसार हिंड्न नसकेकाले पार्टी संकटमा पूगेको बताए। घिमिरेले ३२ बर्षे उमेर हद लगाएर नेबिसंघको केन्द्रिय समिति बनाइनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए ।
प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७५, शनिबार ८ : ४७ बजे